Caadooyinka Venezuela, maxay yihiin dhaqanka Venezuela? | Safarka Absolut
Venezuela waa waddan qani ah oo ay ku nool yihiin saddex dhaqan oo kala duwan sida Isbaanishka, asaliga iyo Afrikaanka. Caddaynta tani waa qayb weyn oo ka mid ah caadooyinka iyo dhaqamada Venezuela oo laga keenay dibedda, gaar ahaan Spain iyo dalal badan oo Afrikaan ah. Dhaqanka asaliga ah wuxuu sidoo kale si weyn u saameeyay dhaqammada caanka ah ee dalka, dhab ahaantii, hadda qayb muhiim ah oo dalka ka mid ah ayaa ka timaadda qowmiyadaha asalka ah ee asaliga ah wali waxay kujiraan Venezuela, meesha aan ka helno Warao oo kamid ah qabiilada ugu matala dalka leh Yanomami ah.
In kasta oo dad badani tixgeliyaan caadooyinka iyo dhaqammada si isku mid ah, waa in lagu xisaabtamo in mid kastaa asal ahaan ka soo jeedo. Caadiyan waxaan tixgelin karnaa dhaqanka reer Venezuela kuwa sidaas ah rujin in iyaga loo aqoonsado inay yihiin dad. Dhaqannada ugu badan ee reer Venezuela waa kuwa reer Yurub, Afrikaan iyo dabcan asal ahaan asal ahaan. Aag kastaa wuxuu leeyahay caadooyin u gaar ah, u heellan ilaahay, halyeeyo caan ah iyo gaar ahaan ciidaha caanka ah ayaa la muujiyaa.
Halkii dhaqanka Venezuela Waxay isku dayaan inay ilaaliyaan dhaqankii ay ka dhaxleen odayaasha. Bandhigyada dhaqanka ee soo jireenka ah waxaa loo kala gudbiyaa jiilba jiilka taas oo maanta noo ogolaaneysa inaan ku raaxeysano ciyaaro, cunno, hadalo, qalabka muusikada, qoob-ka-ciyaarka iyo sidoo kale waxyaabo badan oo na mideeya waagii hore. Dhaqannada Venezuela gudaheeda waxaan ka heli karnaa tiro wanaagsan oo ka mid ah wakiilladaan ka socda dowladaha kala duwan ee ka kooban waddanka. Qodobkaan waxaan isku dayeynaa inaanu kooxeyno kuwa ugu matalaya.
2 Heeso dhaqameed
4 Ciyaaraha dhaqanka Venezuela
5 Shayaadiinta qoob ka ciyaarka
6 Aaska Sardine, mid kale oo ka mid ah caadooyinka Venezuela
7 Saint John festivity
8 Foornooyinka Caracas
9 Carwadii San Sebastián
10 Papelones oo ka socda Tacarigua
11 Xaragada Masiixa
12 Gubashada Yuudas
13 Koofiyadaha Bud
14 Tubaakada iyo caliliilaha
15 Dhaqamada farshaxanka ee reer Venezuela
16 Dhaqamada kirismaska ​​ee Venezuela
Qaab dhismeedka Venezuela dhaqameed waa isku-dar ah dhaqanka wadaniga ah ee soo jireenka ah oo ay weheliso dhaqamada kala duwan ee dibada laga keenay, sida lagu yaqaan sifooyin kale oo badan oo dalka ah. Qalabka la isticmaalay iyo waliba farsamooyinka la adeegsaday ayaa la mid ah kuwii ay awoowayaashu isticmaali jireen, laakiin la jaanqaadka deegaanka iyo isbeddelada qowmiyadeed ee meelaha ay ku rakiban yihiin.
Qoryaha, oo ay weheliyaan bakoorad iyo caws ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan qabiilooyinka kaladuwan ee dalka si ay u dhisaan magaalooyinka ay degaan oo laga helo guud ahaan koonfur-bari dalka. Meelaha ay waraabiyaan wabiyada, guryaha sabeynta ee laga dhiso xeebta wabiyada waxaa loogu yeeraa guryo dhisme iyo waxaa lagu dhisay isla qalabkii sidii hore.
Meelaha buurta, guryuhu hadda ma aha saqaf kaliya oo ay ku hoydaan cnoqo guryo dhab ah iyo halka aan ka helno barxad dhexe, marin marin isku xira qolalka kala duwan iyo wadiiqada. Dhibaatada dhismaha noocan ah ee buuraha waa xaddidaadaha ay ku soo rogeen dhulka ay ku yaalliin.
Waxay kuxirantahay aagaga kaladuwan ee aan booqano wadanka, ha ahaato Andes, xeebta, hawdka ama bannaanka, oo kuxiran waqtiga maalinta, waxaan ogaan karnaa sida dadka degani ay ugu heesan karaan heeso kaladuwan. Heesaha caadiga ah ee caadiga ah tus khibradaha la socda dadka deegaanka maalin kasta. Heesahan waxaa loo sameeyay sidii hees qaafiya oo la socota hawl maalmeedka ragga iyo dumarka maalin kasta ka sameeya goobta. Heesahani waxay ka soo jeedaan xilligii gumeysiga ee addoomada madow lagu isticmaali jiray berrinka waxayna u isticmaaleen heesahan si ay u muujiyaan murugadooda, farxadooda, waaya-aragnimadooda ...
Chinchorro waa shabaqa caadiga ah ee ka laadlaada labada daraf si uu u seexdo ama u nasto saacado, sidoo kale loo yaqaan hammocks. Waxaa lagu sameeyaa dunta loo yaqaan 'moriche thread', oo si ballaaran loogu isticmaalo in lagu sameeyo alaabooyin farsamo gacmeedyo kala duwan oo dalka ka mid ah. Chicharros-kii ugu horreeyay waxaa loo soo saaray sida kuwa hadda jira oo kale, iyadoo la marayo seddex xargo oo ku wareegsan laba ulood oo dhulka ku dheggan si ay u awoodaan inay u tollaan meerisyada oo ay u awoodaan inay ku xirtaan nus-gunti iyo inay ka dhigaan cabbirka la doonayo.
Ciyaaraha dhaqanka Venezuela
Tirada badan ee cayaaraha dhaqameed ee ka jira Venezuela waxay ka dhasheen isdhexgalka hidaha reer Yurub, gaar ahaan Isbaanishka, dadka asaliga ah iyo, in yar, Afrikaanka. Ciyaar kasta waxay leedahay astaamo u gaar ah laakiin dhammaantood weli waxay ilaalinayaan nuxurka Venezuela mestizo, rumeeye iyo farxad. Qoob-ka-ciyaarka dhaqanka ee ugu badan ee ka dhaca waddanka Venezuela waa Sebucán ama Palo de Cinta, Turas iyo Maremare.
Sebucán ama Stick of ribbons asal ahaan reer Yurub wuxuu ka kooban yahay qoob-ka-ciyaarka geed, gaar ahaan cibaadooyinka lagu xuso imaatinka guga. Las Turas waa qoob-ka-ciyaarka diineed ee caadiga ah ee asalka ah ee asaliga ah kaas oo loo dabaaldego dhammaadka Sebtember ilaa mahadsanid dabeecadda faa'iidooyinka la helay inta goosashadu badantahay. Ugu dambeyntiina waxaan kaheleynaa qoob ka ciyaarka Maremare ee lagu sharfayo marxuumka. Erayada qoob ka ciyaarkaas waa la hagaajiyay oo qoob-ka-ciyaaruhu wuxuu ka kooban yahay qaadidda tallaabooyin horay iyo gadaal.
Shayaadiinta qoob ka ciyaarka
Sannad kasta marka loo dabbaaldego Corpus Christi, halkaas oo diinta iyo sixirka la rumaysan yahay ee wanaagga laga sheego sharka, qoob-ka-ciyaarka dhaqanka waxaa sameeya Shayaadiinta meelo kala duwan oo dalka ka mid ah. Shayaadiintu waxay matalaan Lucifer xirashada dhar midab leh iyo maaskar matalaya ujeedka in la isu dhiibo karaamada ugu karaamada badan.
Shayaadiinta ayaa lagu ururiyaa ururo ama bulshooyin, waxay wataan iskutallaabooyin, tusbaxyo ama shay kasta oo diimeed ah inta lagu guda jiro ciida waxay tukadaan salaado, oo ay kujiraan tiro. Waxay xirtaan surwaal casaan ah, shaati iyo dabool iyo sidoo kale waxay xidhaan dawanno iyo jiingado ka soo laalaada dharkooda. Maaskarada waxaa loogu talagalay midabbo geesinimo leh iyo muuqaalo kulul, ama ugu yaraan taasi waa waxa ay isku dayayaan inay sameeyaan. Dharka sheydaanku wuxuu ka kooban yahay qalab kala duwan sida dabada, sanqalloocyada, shaqada iyo maraca. Ahaanshaha dhaqan caan ah waddanka oo dhan, waxaan ka heli karnaa shayaadiinta qoob-ka-ciyaarka kala duwan ee loo qaybiyey waddanka oo dhan, laakiin kuwa ugu muhiimsan ayaa ah kuwa Yare, Naiguatá iyo Chuao.
Aaska Sardine, mid kale oo ka mid ah caadooyinka Venezuela
Sidii Spain oo kale, aaska sardinku waa muujinta caanka ah ee xireysa meertada xafladaha Carnival waxayna damaanad qaadeysaa in markale loo dabaaldegi doono sanadka soo socda. Iidda Carnival waxay la xiriirtaa caado tababarida feeraha doofaarka oo loo yaqaan sardine oo astaan ​​u ah mamnuuca cunida hilibka inta lagu gudajiray maalmihii Soonka. Markii hore waxaa la aaminsanaa in tilmaantan ay ahayd inay soo jiidato kalluumeysiga wanaagsan iyo bacriminta xoolaha taasoo hubin doonta cuntada mustaqbalka.
Socodka aaska sardarka waxaa hogaaminaya xeer ilaaliyaha mas'uulka ka ah nadiifinta jidadka ay aasi doonaan sardarka, waxaana ku xigi doona wiil allabari iyo wadaad oo raacaya aaska aas aaska oo ka kooban a gaadhiga lagu sharraxay waxyaalo kala duwan oo ubaxyo ah. Dhex sabaynta shaxda sardinka ayaa wakiil ka ah.
Waxaa loo dabaaldegaa sida Spain oo kale Juun 24 iyo u dabaaldegaan dhalashada awliyada. Dabaaldeggan wuxuu isu keenayaa tiro badan oo mu'miniin ah iyo cibaado leh gobollada lagu dabaaldego, maadaama aan si siman loogu dabaaldegin dhammaan gobollada Venezuela. 24-ka Juun goor hore oo subaxnimo ah, wali wuxuu diyaar u yahay inuu ka tago guriga uu ku yaalo kaniisada oo ay weheliyaan kuwa ugu cibaado badan sidaasna imaatinka dad weyne ayaa loo dabaaldegayaa oo bilaabaya inuu soo jiito durbaanada dhex mara magaalada oo dhan, wada jir la socoda qofka qaata mahadhada muuminiinta markuu marayo.
Cunnooyinka dhaqanka ee reer Venezuela kuma dhalan kuleylka kuugga weyn, ama kariyeyaasha makhaayadaha waaweyn, cunnada caadiga ah ee Caracas. Wuxuu ku dhashay guriga dadka reer Venezuela, midhaha shaqadiisa iyo hamigiisa cunto karinta iyo iyagoo isku dayaya inay sida ugu badan uga helaan cuntada ay ka heleen beeraha iyo xoolahaba. Markii ay haweenku bilaabeen inay mas'uul ka noqdaan jikada, cuntada Caracas waxay ku bilaabatay soo saarista macmacaan iyo macmacaan, gaar ahaan markay adeegeyaashu mas'uul ka ahaayeen sameynta cuntada, si ay isugu dayaan inay qanciyaan dadka macaamiisha ah.
Sida dhaqamada kale ee Venezuela, cuntada Venezuela waxaa aad u saameeya Isbaanishka, Afrikaanka iyo kiiskan sidoo kale asaliga ah. Cunnooyinka caadiga ah ee reer Venezuela waa bacaadka galleyda, sado madow, keeg aubergine ah ...
Carwadii San Sebastián
Carwada Caalamiga ah ee San Sebastián waa mid ka mid ah caadooyinka ugu muhiimsan ee dalka Venezuela. Waxaa looga dabaaldegaa magaalada San Cristóbal, oo ku taal gobolka Táchira, labadii toddobaad ee labaad ee Janawari. Sidoo kale oo loo yaqaan 'Bullfighting Fair of Venezuela' Waa goobta ugu habboon ee loogu talagalay dadka jecel dib-u-dagaalinta dibiga ee waddanka inay ku raaxaystaan ​​dagaalyahannada waaweyn ee adduunka ku baahsan.
Carwadan ayaa soo jiidata tiro badan oo ajaanib ah oo soo booqata waana waayo aragnimo taas waxay bixisaa fursado madadaalo oo weyn gobolka Táchira sida waddanka oo dhan, tan iyo marka laga soo tago dagaalyahannada dibiga loo yaqaan ee sumcadda caalamiga ah la aqoonsan yahay, xirfadlayaal waaweyn oo dalka ka tirsan ayaa sidoo kale ka soo qayb gala carwada, kuwaas oo aan yareyn.
Papelones oo ka socda Tacarigua
Tacarigua waxay ka kooban tahay kalluumeysi iyo bulshooyin beeraley ah oo ku yaal jasiiradda Margarita. Sannado badan waxay u sameeyeen joornaalka loogu talagalay isticmaalka gudaha iyo inay ka iibiyaan beelaha kale. Papelón wuxuu ka yimaadaa bakooradda sonkorta leh waxay leedahay qaab isku mid ah, wuxuu qiyaasaa ilaa 20 sentimitir sare iyo saldhig 10 ilaa 15 sentimitir ah. Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu macaano shukulaatada ama kafee, si loo sameeyo dhalo tolo ama toonta liin dhanaan
Imaatinka Toddobaadka Quduuska ah, sida Isbaanishka, kaniisadaha waxay aadaan kaniisadaha si ay u bixiyaan waxqabadyo iyo ficillo lagu xasuusto ficilkii uu wiilka Ilaah u sameeyay dadka oo dhan. Laakiin Venezuela, sidoo kale waxaa jira a matalaada dadweynaha ee bilaabeysa maalmaha ugu dambeeya ee Masiixa ee dhulka. Wakiiladan waxaan ku arki karnaa Xanaaqa iyo Dhimashada Masiixa, oo ka kooban 15 muuqaal oo ka hadlaya sheekada Ciise Masiix.
Laakiin kaliya ma aha Xanaaqa iyo Dhimashada Masiixa, laakiin sidoo kale muuqaallo muujinaya soo gelitaankii Masiixa ee Yeruusaalem, isku dhufashada kibista, cashada Quduuska ah, beerta saytuunka, Via Crucis, Qiyaamada, iskutallaabta ayaa wakiil ka ah.
Gubashada Yuudas waa mid ka mid ah caadooyinka Venezuela ee matalaya qanacsanaanta bulshada ee dhacdooyinka siyaasadeed iyo waliba dhaqankooda guud ahaan, laakiin sidoo kale waxay u adeegtaa si loo dhammeeyo Lent iyada oo loo diyaarinayo sarakicitaankiisa sanadka soo socda. Sababta gubashadan ayaa ah in la xasuusto Yuudas khiyaanadiisa Masiixa, isagoo tilmaamaya dabeecadda khiyaanada dadkiisa. Yuusleyda doll ee gubanaysa waxay ka samaysan tahay maro, casaan duug ah iyo calalyo, lagana buuxiyay rashka, kuwaas oo la shido marka dolelka la sudho oo la gubo.
Koofiyadaha Bud ayaa ah Jasiiradda Margarita waa isha dhaqaale ee ugu weyn. In kasta oo muuqaalkeedu fudud yahay, soo saarista gacanta ee koofiyadahaas ma ahan wax fudud oo waxay u baahan tahay xirfad badan oo lagu awoodo sameynta. Koofiyadan noocan ah muddo dheer ayaa laga aqbalay waddanka gudihiisa iyo jasiiradaha Caribbean-ka, laakiin sannadihii u dambeeyay wax-soo-saarku xoogaa wuu yaraaday, isagoo la jaanqaaday baahiyaha jira. Koofiyadaha oo ay ku jiraan burooyinkooda, boorsooyinka, roogagga, daboolka ...
Tubaakada iyo caliliilaha
Farshaxanka kobcinta iyo soo saarista tubaakada ayaa loo ilaaliyaa inay tahay mid ka mid ah dhaqanka qoyska reer Venezuela, in kasta oo sanadihii la soo dhaafay ay hawlo kale oo wax soo saar dhaqaale badani ay ka dhigayaan wax soo saarka tubaakadu wuxuu ku fadhiyaa kursiga dambe. Wax soo saarka tubaakada ayaa loo qaybiyaa Calilla, si loo sameeyo sigaar caato ah oo walxo la xushay ah. Dhinaca kale waxaan leenahay Tubaakada, oo loogu talagalay soo saar tiro badan oo joogto ah. Markii hore, tubaakada waxaa lagu iibin jiray waddanka oo dhan, laakiin hoos u dhaca dhimista awgeed, waxaa hadda lagu cabayaa oo keliya Gobolka iyo bulshada Los Millanes halkaasoo laga helo beerashada geedkaan.
Dhaqamada farshaxanka ee reer Venezuela
Waxyaabaha farsamada gacanta lagu farsameeyo ee Venezuela waxaan ka heli karnaa walxaha qurxinta, cuntada, cabitaanka, dhoobada, Kaysariyada, khamriga, qalabka xafiisyada, ranjiyeyaasha, dharka, kabaha, dharka, dahablayaal, qurxinta, walxaha alwaaxa, hammocks, hammocks ... Kuwani Oraahda farshaxanku waxay u oggolaaneysaa dadka deggan inay tus habka nolosha iyo nafta dadka reer Venezuela.
Dhaqamada kirismaska ​​ee Venezuela
Ahaanshaha dad diimeed qoto dheer, imaatinka Kirismaska, mid ka mid ah dhaqannada Venezuela ayaa ah gees kasta oo ka mid ah Venezuela wuxuu isu diyaariyaa imaatinka ilmaha yar ee Ciise. Bilowga Diseembar, farxadda taariikhaha soo dhowaanaya ayaa bilaabeysa in la arko oo shirar, rootiyo, dabaaldegyo loogu dabaaldegayo imaatinka cunugga Ciise ee koone kasta oo dalka ka mid ah ay aad u soo badanayaan. Laakiin intaa waxaa sii dheer waxaan sidoo kale helnaa muuqaalo kale oo ah in coscones-ka uu kordhin karo dabaaldega Kirismaska ​​ilaa Febraayo, sida gunooyinka Kirismaska, qabaal, bacda, gunooyinka kirismaska ​​ee badan, isusocodka, sabtiyada, dhaanada adhijirrada, maalinta oo ka mid ah Quduusyada Quduuska ah, imaatinka Magi, sanadka cusub, sanadkii hore ...
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay dhammaan kuwan Dhaqannada Venezuela inkasta oo haddii aad inbadan rabtay, halkan aad ka akhrisan karto waxa ay caadooyinka Venezuela caadi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhaqammada Venezuela
Waan jeclahay dalkayga, Venezuela, waa wax qurux badan, maahan inaan xasidno wadan dhan, maxaa yeelay waxay leedahay wax walba, muuqaallo, xeebo, buuro, webiyaal, iwm. Waan jeclahay dalkayga, waxba ugama beddelo, waxaan jeclahay dhaqamadiisa iyo dhaqamadiisa
Ku jawaab hildA DE MIRABAL
Waa kan dalka soo saara caano iyo malab! Aamiin ...
Ku jawaab brian pinto
Qashin-ka-dilinta xaasidnimo xun siyaasad saafi ah oo aad u fool xun
Ku jawaab leanyeli varela guillen
waad salaaman tihiin Táchira meelaha quruxda badan ee aan istaagnay, iyagu waa aniga cirka sare waana sababta ay u qurux badan tahay, Venezuelakeyga, maahan inaan ka hinaasano wax dal ah, maxaa yeelay waxay leedahay wax walba, muuqaallo, xeebo, buuro, wabiyaal, iwm Waan jeclahay dalkayga, waxba ugama beddelo, waxaan jeclahay dhaqamadiisa iyo dhaqamadiisa. Laga soo bilaabo La Grita.
Jawaab EMMA SANCHEZ GARCIA.
light angelinys ubaxyo prada dijo
hello ka Mamporal Venezuela waa wadan aad u balaaran dhaqammo badana waxay leeyihiin waxyaabo badan oo aniga iyo dhamaanteen aan ku raaxeysan karno waxyaabahaasina waa wabiyada, xeebaha, jardiinooyinka, buuraha iyo waxyaabo badan oo badan oo Venezuela ay leedahay calankeeda, heesteeda iyo dabcan wadan horey u jiray a in Venezuela aadan heli karin cunto waxaadna maqleysaa kaliya dhac saafi ah oo ku saabsan wararka, tartiib tartiib wadankeygu wuu is badalayaa, waan ogahay, gadaalna uma laaban doono laakiin horay iyo gadaalba taas bedelkeedna iskama badali doono, xitaa dahab u ah Venezuela.
Ku jawaab luz angelinys flores prada
Venezuela waa wadan aad u balaaran dhaqammo badana waxay leeyihiin waxyaabo badan oo aniga iyo dhamaanteenba aan ku raaxeysan karno waxyaabahaasina waa wabiyada, xeebaha, beeraha nasashada, buuraha iyo waxyaabo badan oo badan Venezuela ayaa leh calankeeda, heesteeda iyo dabcan wadankii horeyba uga jiray Venezuela Adiga Cunto maheli kartid waxaadna ku maqleysaa kaliya wararka, tuugada saafiga ah, inyar oo yar wadankeygu wuu isbadalayaa, waan ogahay, gadaalna ugama noqon doono laakiin horay iyo gadaal kagama badalo Venezuela, xitaa dahab. aniga cirka sare dushiisa waa sababta ay u qurxoon tahay, Venezuelakeyga, uma baahnin inaan waddan kasta ka hinaasano wax uun, maxaa yeelay waxay leedahay wax walba, muuqaallo, xeebo, buuro, webiyaal, iwm. Waan jeclahay dalkayga, waxba ugama beddelo, waxaan jeclahay dhaqamadiisa iyo dhaqamadiisa. Laga soo bilaabo La Grita.Waan jeclahay dalkayga, Venezuela, waa wax qurux badan, uma baahnin inaan waddan kasta uga hinaasano wax uun, maxaa yeelay waxay leedahay wax walba, muuqaallo, xeebo, buuro, webiyaal, iwm. Waan jeclahay dalkayga, waxba ugama beddelo, waxaan jeclahay dhaqamadiisa iyo dhaqamadiisa
Jawaab inaad dib uhesho
Dalkaygu waa kan ugu fiican, wuxuu leeyahay caadooyin iyo dhaqamo ugu fiican
Ku jawaab Keudys garcia
Waa salaaman tahay, waxaan ahay Verónica Jaramillo oo waxaan ahay Tigres, waan jeclahay tababarkan, waxaan rajaynayaa in bogagga oo dhami ay sidaas oo kale ahaayeen oo fikrad badani ka jirtay.
Ku jawaab verónica Jaramillo
Waxaan ahay Masiixi
Waad ku mahadsan tahay gelinta boggan
In kasta oo duruufaha aan ku nool nahay, Venezuela waa dalka ugu fiican .. Waan jeclahay waana ku sii socon doonaa halkan .. caadooyinkeeda iyo dhaqamadeeda .. Aniga waxaan ahay Andean mana jiraan dad u fiican oo dadaal badan sida Gochos
Ku jawaab zoraida ramarez
Haye, waxaan raadinayaa gabar saaxiib ah, dheh 33
Jawaab jon mayorca
Shabakadani waa mid aad u qabow si aad u aragto wax yar oo ka mid ah VENEZUELA iyo dhaqamadeeda.
Waan jeclahay waddankayga, waa kan ugu fiican adduunka inkasta oo xilligan aynaan fiicnayn, waxaan ogahay in dadka reer Venezuela ay ka tagayaan dalkan… Waxaan la joogaa waddankayga…. Waxaan nahay dad dagaalyahan ah waxaanan dooneynaa inaan difaacno qiimo kasta haku kaco….
Ku jawaab Glorianny
kalluun qolof ah
Ku jawaab waalan
aad ufiican laakiin talo ma ahan papelones de Tacarigua, sawirkaasi wuxuu ka yimid tuulada Quebrada Negra ee ka tirsan degmada Seboruco ee Tachira State
Jawaab johana gonzalez
Waan jeclaaday maqaalkan it .waa mid aad u wanaagsan dabcan waan ku jeclahay waan ku hambalyeynayaa… # Amovenezuela
Ku jawaab yonelkis ugas
Sida looga tago Havana loona tago Varadero